Treasure Coast, FL • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fanosotra vatana ao Treasure Coast, FL.
Ny Treasure Coast dia faritany ao amin'ny fanjakan'i Etazonia Florida. Any amin'ny morontsirak'i Atlantika no misy azy, misy renirano Indiana, St. Lucie, ary Martin, ary amin'ny famaritana sasany, ireo faritanin'i Palm Beach. Ilay faritra, izay manondro ny Fleet Treasure Spanish dia very tamin'ny rivodoza tamin'ny 1715, dia toa nipoitra avy amin'ny fanirian'ny mponina hanavahana ny tenany avy any Miami sy ny faritra Gold Coast mankany atsimo. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-batana ao amin'ny Treasure Coast, FL.